Waxsoosaarayaasha & Shirkadaha AP ee Gudaha - Shiinaha Gudaha AP
WL8200-X10 Gudaha 802.11ax Wi-Fi 6 Triple Band Enterprise AP
WL8200-X10 waa jiil soosocda Wi-Fi 6 shirkad waxqabad sare Wi-Fi AP (Access Point) oo ay sii deysay DCN, waxay taageeri kartaa 802.11ax waxayna siin kartaa 2.5G Ethernet isku xirnaanta isku xidhka Iyada oo waxqabad sare leh 6.82Gbps marinka marinka, WL8200-X10 ayaa la filayaa inuu yeesho isku xirnaan macmiil oo cufnaan sare leh si loo soo bandhigo khibradda isticmaale Wi-Fi. Iyada oo ay weheliso saddex qaybood oo kala ah wershadaha hoggaamiya 14 durdurro kala durugsan, WL8200-X10 ayaa ah xulashada ugu habboon ee cufnaanta sare iyo xaaladaha baaxadda leh ee ballaadhinta sare leh sida codsiga AR / VR, 4K ...
WL8200-I3 (R2) Gudaha 802.11ac Wave2 Triple Band Enterprise AP
DCN WL8200-I3 (R2.0) waa shirkad tayo sare leh oo ah Wi-Fi AP (Access Point), oo taageeri karta 802.11ac Wave2 isla markaana siinaysa Gigabit Ethernet isku xirnaanta isku xirnaanta. Iyada oo waxqabad sare leh 2.9Gbps ​​marinka marinka, WL8200-I3 (R2.0) ayaa la filayaa inuu yeesho isku xirnaan macmiil oo aad u sarreysa si loo soo bandhigo khibradda isticmaale Wi-Fi. Waxay bixisaa karti adeegyo dhammaystiran iyo astaamo sida hawlgal fudud, helitaan toos ah AC iyo qaabeyn, kalsooni sarreysa, nabadgelyo sare, iyo maareyn waqtiga-dhabta ah ...
WL8200-I2 (R2) Gudaha 802.11ac Wave2 Dual Band Enterprise AP
DCN WL8200-I2 (R2.0) waa shirkad waxqabad sare Wi-Fi AP. Waxay taageertaa heerka 802.11ac Wave2 waxayna siisaa Gigabit Ethernet isku xirnaanta korantada. Xawaaraha ugu badan ee marin-u-helka wuxuu noqon karaa 1167Mbps. Waxay bixisaa karti adeegyo dhammaystiran iyo astaamo sida hawlgal fudud, helitaan toos ah AC iyo qaabeyn, kalsooni sare, nabadgelyo sare, iyo maareyn iyo dayactir waqtiga-dhabta ah. WL8200-I2 wuxuu ku habboon yahay ganacsiga, dowladda iyo suuqyada soo dhoweynta. Astaamaha Muhiimka ah iyo Hi ...
WL8200-I1 802.11ac Gudaha Gudaha Labada Shirkad AP
WL8200-I1 waa shirkad qiimo-ku-ool ah oo ah 802.11ac barta marin-u-helidda wireless (AP) oo taageeri karta 2 × 2 MIMO iyo 4 durdurro bannaan. Waxay bixisaa karti adeegyo dhammaystiran iyo astaamo sida hawlgal fudud, helitaan toos ah AC iyo qaabeyn, kalsooni sare, nabadgelyo sare, iyo maareyn iyo dayactir waqtiga-dhabta ah. Iyadoo lagu saleynayo heerka 802.11ac, wadarta wadarteedu waxay gaari kartaa 1167Mbps taas oo lagu dabaqi karo silsiladaha ganacsiga, caafimaadka, bakhaarka, wax soo saarka, iyo saadka ...